Tet Thit Nay Wun - တက္သစ္ေန၀န္း Construction
ဗိုလ်တထောင်က တိုက်ခန်း ဗိုလ်တထောင်တိုက်ခန်း ရဲ့ အကြောင်းအကျဉ်း- ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက် ကျောင်း၊စျေး၊ဘုရားနဲ့ဆေးရုံတို့အနီး မြို့ထဲနဲ့လည်းနီးပြီးကားပါကင်လည်းများတဲ့နေရာ လေဝင်လေထွက်ကောင်း၊ဘေးတွင်တိုက်မရှိ လုံးဝပြန်ပြင်စရာမလို၊ အိတ်တစ်လုံးနဲ့လာနေနိုင်မည့်အခန်း ဝယ်ပြီး အသင့်ပြန်ငှားရန် တိုက်ခန်း 09 510 5775, 09 5123 729, 09 50 200 52, 09 45 775 0011 ================== ဗိုလ်တထောင်တိုက်ခန်း ================== လိပ်စာ အမှတ်(၂၁ /၂၃) ၊ ဗိုလ်တထောင်လမ်းသွယ် (၃)၊ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။ ၈လွှာ (ညာ) မျက်နှာစာအလှည့် တောင် ဘက်လှည့် စျေးဝယ်ဖို့အတွက်ဆို Ocean, Orange supermarket, Capital shopping mall၊ City mart လူကြီးများအတွက်ဆို ဗိုလ်တထောင်ဘုရား အပန်းဖြေဖို့အတွက် Water Boom၊ ရှုခင်းသာ Bowling ၊ Bar အစားအသောက်အတွက်ဆို 50th Bar, Lucky Seven အရေးပေါ်အတွက် ဂန္ဒီဆေးရုံ 09 510 5775, 09 5123 729, 09 50 200 52, 09 45 775 0011 ================================ ပါဝင်သော Facilitiesများ (အသေးစိတ်) ================================ အခန်းများကတော့ မိသားစုတွေအတွက် လုံလောက်တဲ့ အကျယ်အဝန်း (20’ x 50’), စတုရန်းပေ 1000 ✔️ မာစတာအိပ်ခန်းတစ်ခန်း ✔️ ရိုးရိုးအိပ်ခန်းတစ်ခန်း ✔️ ဧည့်ခန်းတစ်ခန်း ✔️ မီးဖိုချောင်တစ်ခန်း ✔️ ရေချိုးခန်း+ အိမ်သာ ၂ ခန်း ✔️ Aircon ၂လုံး တို့ပါဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင် အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး အခန်းဖွဲ့စရာမလိုတော့ပါဘူး. ဧည့်ခန်းအတွက် ---------------------- Main Door အတွက် Steel Main Door Korea Vinyl Floor အပြည့် ဧည့်ခန်းကို ဆေး ၃ထပ်အပြည့် သုတ်ပေးထားခြင်း . ဧည်ခန်း Decoration အတွက် မျက်နှာကျက်များ ရေချိုးခန်း အတွက် ဘေစင် အိပ်ခန်းအတွက် ----------------------- အိပ်ခန်းအတွက် ISO လက်မှတ်ရ ABS သစ်သားတံခါးများ အိပ်ခန်းကို ဆေး ၃ထပ်အပြည့် သုတ်ပေးခြင်း အခန်းတွင်း နံရံတွင် အသံလုံရန်အတွက် insulation ထည့်ပေးခြင်း။ ရေချိုးခန်းအတွက် ------------------------ ✔️ရေချိုးခန်း နဲ့ အိမ်သာ အတွက် ဘိုထိုင် (Royal Apex) နှင့် ✔️ ဘေစင်‍ ✔️တစ်ခန်းလုံးကြွေပြားကပ် ✔️Exhaust Fan မီးဖိုချောင်အတွက် --------------------- ✅ မီးဖိုချောင် ကြမ်းခင်းနှင့် နံရံလေးပေအထိ ကြွေပြားကပ်.. ✅ မီးဖိုချောင်အတွက် လှပပြီးသေသပ်တဲ့ Kitchen ဗီရိုများ ✅ လျှပ်စစ်မီးဖို အဆင်သင့်တပ်ဆင်နိုင်ရန် မီးအားနိုင်သော မီးလိုင်းနှင့် 3Pin ပလပ်ပေါက်များ 09 510 5775, 09 5123 729, 09 50 200 52, 09 45 775 0011 ================================ ဈေးနှုန်းနှင့်ငွေပေးချေပုံစနစ် ================================ ✔️ဈေး- အပြီးအစီး သိန်း 700 09 510 5775, 09 5123 729, 09 50 200 52, 09 45 775 0011 ============================== ============================== ☎️ဆက်သွယ်ရန် နှင့် အသေးစိတ်စုံစမ်းရန်☎️ ============================== ☎️ဗိုလ်တထောင်တိုက်ခန်း ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ကဖုန်းလေးကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ ☎️ 09 510 5775, 09 5123 729, 09 50 200 52, 09 45 775 0011 ရုံးခန်းလိပ်စာ အမှတ် ၉၀၃ ဗြဟ္မစိုရ်လမ်း ၅ ရပ်ကွက်၊ ၇လွာ (A) တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
Kreatív ajándék ötletek, lakás dekor tippek, fotókihívások és még sok más.. =================================== Ezeket mind megtalálodaFacebook oldalunkon. Kövess minket és ötleteld magad kreatívra.
Tilton Jax Nissan - New and Used Cars, Parts and Service - Davenport, IA.
❤️ Saigon IELTS Mentor - Trung tâm luyện thi IELTS Tin Cậy cho Học Sinh Sinh Viên, Cam Kết 6.5, chỉ từ 750K / Tháng ❤️ ➡️Campus 1: Số7Trần Thị Nghỉ, Phường 7, Gò Vấp ➡️Campus 2: P2 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh ➡️Campus 3: 781/A12 đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10 Đặt lịch tư vấn : https://goo.gl/ASL6G6
กางเกงบ๊อกเซอร์ Boxer ราคาส่ง - By WE-N
บ๊อกเซอร์ผ้า Woven (ผ้าเชิ้ต) ขนาดฟรีไซส์ เอว 25-36 นิ้ว ตัดเย็บดีมาก เนื้อผ้าCotton การันตียอดขายกว่า 1,000,000 ตัว
No almoço de quinta-feira dia 11-4 serviremos como entrada cebola empanada, no prato principal costelinha barbecueebatata rústica,ede sobremesa mousse de maracujá. Para finalizar, aquele cafezinho preparado na mesa, fresquinho!
Vrhunski dodatek sodobnim gospodom gentle "Mislim, da mora imeti vsak moški, ki drži do sebe, denarnico, kot je ta" - Ivan
Trzymający w napięciu kryminał, porywający romans, intrygująca biografia, fascynujący reportaż czy ciekawy poradnik. Skorzystaj z promocji i ciesz się ulubioną lekturą! ➡ https://turl.pl/Książkowy-zawrót-głowy-Aros
Kinesiologie & Cranio Sacral Ausbildungen Österreich - AKADEMIE kinesiologiebewegt
IKONACY || Build Your Luxury Life
⭐ 30 JOURS GRATUITS ⭐ Offrez-vous le meilleur du Fitness chez Gigafit Fréjus ! Et pour le mois d'Avril, bénéficiez de notre #OffrePromo avec 30 jours GRATUITS pour tout nouvel abonnement ! Attention, l'offre est limitée ! Faites vite ! Cliquez ici pour vous pré-inscrire : bit.ly/GFFrejus 19 Via Nova - Pole Excellence Jean Louis - Z.I. du Capitou ☎ 04 94 53 46 58 100% PLAISIR, 100% FITNESS * voir conditions au club
Start your journey and #TravelinNokha
PRÁCE: Provozní elektrikář. 25 dní dovolené, závodní stravování, kratší pracovní doba. Více info najdete v odkazu níže ⬇⬇⬇
A Young Energetic Girl, Entrepreneur, Motivational Speaker and Marketing Strategist�
Studio de tatouage à Mohammedia, tatouages sur mesure et personnalisé.
MY BOO - Moda Para Cachorro – MY BOO STORE
DMEX SMART KEY
Very happy with these cute oxfords! https://bit.ly/2GEOeYT #wondersheexlusive #codeSP10 #121USDonly #leathershoes